Maxaa Ka Mid ah shanta Qodobada ee Muranka Dhaliyay doorashada dalka ? -
HomeArimaha bulshadaMaxaa Ka Mid ah shanta Qodobada ee Muranka Dhaliyay doorashada dalka ?
August 24, 2021 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Shirkii ay Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, 21-kii iyo 22-kii bishan, waxa ay ku heshiiyeen hab raaca doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee soo aaddan.
Shirkaasi Waxa ay madaxda ku sheegeen in ay ku dhammaystirayaan go’aannadii midkii ay yeesheen 29-kii bishii June. Waxay sheegeen in kullankan ugu dambeeyay uu yahay mid ay si gaar ah ugu dhammaystirayaan habraacyada doorashada.